३१ पटक जाँच गर्दा पनि कोभिड रिपोर्ट पोजेटिभ
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्य३१ पटक जाँच गर्दा पनि कोभिड रिपोर्ट पोजेटिभ
विराटनगर / एक महिलालाई ३१ पटकसम्म जाँच गर्दा पनि कोभिड पोजेटिभ देखिइरहेको छ
भारत जयपुरस्थित भरतपुरकी ३२ वर्षीय एक महिलाको ३१ पटकसम्म कोरोना जाँच गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ देखाइरहेको हो । गत वर्षको २४ अगस्टमा उनलाई पहिलोपटक जाँच गरेपछि कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । त्यसयता उनले हालसम्म ३१ पटक कोरोना जाँच गराइसकेकी छन् ।
यीमध्ये १४ पटक आरटी पिसिआर विधिबाट र १७ पटक एन्टिजेन विधिबाट उनले कोभिडको जाँच गराएकी हुन् । पछिल्लोपटक उनले ७ जनवरीमा आरटी पिसिआर र १० जनवरीमा एन्टिजेन विधिमार्फत कोरोना जाँच गराएकी थिइन् । उनको रिपोर्ट पुनः पोजेटिभ आएको थियो । ती महिलालाई ‘अप्ना घर’ केयर होममा १ सेप्टेम्बरमा ल्याइएको थियो ।
१५ अक्टोबरमा गराइएको जाँचमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि त्यहीँ उनी पुनः सङ्क्रमित भइन् । अप्ना घर प्रशासनले जनाएअनुसार ती महिला मानसिक रोगी छन् र उनको हेरचाह गर्ने कोही छैनन् । हाल उनलाई आइसोलेनसमा राखिएको छ । ती महिलालाई कोरोना भाइरसको रिपोर्ट नेगेटिभ आउनका लागि अझै कतिपटक जाँच गर्नुपर्ने पत्तो छैन ।
भरतपुरका चिफ मेडिकल हेल्थ अफिसर डा. कप्तान सिंहले उनमा कोरोनाको कुनै लक्षण नभएको बताएका छन् । प्रतिक्रियाविहीन भाइरस शरीरभित्र रहेकाले उनको रिपोर्ट पटक–पटक पोजेटिभ आइरहेको हुन सक्ने डा. सिंहको भनाइ छ । उनले अरूलाई सङ्क्रमित गर्ने सम्भावना पनि कम रहेको बताइएको छ ।